अत्यन्तै दुखद खबर : नेपाल को’रोनाको अति उच्च जो’खिम भएको ड’रलाग्दो सूचना ! सक्दो शेयर गरौँ। - Nepal Insider
February 28, 2020 1294
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डव्लुएचओ)ले नेपाललाई को’रोना भा’इरस (कोभिड–१९)को अति उच्च जो’खिम भएको मुलुकको सूचीमा राखेको छ । डव्लुएचओको मुख्यालयमा विहीबार बसेको साप्ताहिक ब्रिफिङपछि नेपाल को’रोना भा’इरसको अति उच्च जो’खिमको सूचीमा परेको हो । डव्लुएचओले नेपालसहित दक्षिण एसियाका भारत श्रीलंका, पाकिस्तान र अगगानिस्तानलाई समेत कोरोना भा’इरसको अति उच्च जो’खिम भएको देशको सूचीमा राखेको छ । यसबाहेक अफ्रिकी केही देशहरु पनि सो सूचीमा परेका छन् । डव्लुएचओले यसअघि चीनलाई मात्रै अति उच्च जो’खिममा राखेको थियो ।
नेपालमा एकजना बाहेक कसैलाई को’रोना भा’इरस सं’क्रमण देखिएको छैन । तर विश्वका विभिन्न देशमा फैलँदोक्रममा रहेको यो भा’इरस यदि नेपाल छिर्यो भने त्यसले भयावह अवस्था निम्त्याउन सक्ने भन्दै डव्लुएचओले अति उच्च जो’खिमको सूचीमा राखेको छ ।
डव्लुएचओले अति उच्च जो’खिममा राखेको जानकारी पाए लगत्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक पूर्व तयारीलाई थप तिब्रता दिइएको बताएको छ । उसले स्वास्थ्य विभागसँग समन्वय गरी तयारीलाई तिब्रता दिएको जानकारी दिएको हो । विभागले देशव्यापी रुपमा को’रोना वि’रुद्धको अ’भियानमा लाग्न भन्दै अबको १५ दिन अरु कार्यक्रममा नलाग्ने र नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
स्वास्थ्य विभागले आम सर्वसाधारणलाई आ’त्तिई हाल्नुपर्ने अवस्था नभएपनि स’तर्कतामा रहन आग्रह गरेको छ ।
विदेशीहरु नेपाल छि’र्ने मुख्य नाका त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले केहीवर्ष अघिदेखि त्यहाँ हेल्थ डेस्क सञ्चालन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय को’रोनाको प्र’कोप बढेपछि सो डेस्कलाई थप व्यवस्थित बनाएको छ ।
थर्मलस्क्यानर र इन्फाइरेड थर्मामिटरका माध्यमबाट हवाई यात्रुहरुको ज्वरो लिने काम भएको बताएको छ । तर सो कार्य प्रभावकारी नभएको हवाई यात्रुहरुले बताउँदै आएका छन् ।
Prevशनिदशा हटाउन संकटा माईको दर्शन गरि भेटि स्वरूप एक शेयर गर्दै भोलि शनिबार फाल्गुन १७ गतेको राशिफल पढ्नुस संकटा माताले सबैको रक्षा गरुन
Next‘शेरधन राई मेरा पति हुन् नाता कायम गरी अंश दिलाई पाउँ’ भन्दै बालिकाले दिइन् अदालतमा मु’द्धा (भिडियो सहित)
दुई छोरी र ५० लाख सहित अर्कै युवकसंग भागेकी अनुपा यस्तो अवस्थामा फेलापरिन ! अनुपासंग छिमेकी दिदिकाे हरेक दिन कुरा हुने (भिडियोसहित)
फेरी ८ दिनका लागी लकडाउन थप्यो सरकारले वैशाख ३ पछि के होला